Ndizi-odola njani iingoma kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndizi-odola njani iingoma kwiTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 277
Umculo ubaluleke kakhulu Kwiinkalo ezininzi zobomi bemihla ngemihla, kwabaninzi yile nto bayifunayo ukwenza imisebenzi yabo yemihla ngemihla, kwabanye yindlela yokuphila kuyo nayiphi na intsimi yabo kwaye abanye bayisebenzisa njengendlela yokuthengisa iimveliso ezininzi. Inyani yile yokuba umculo yenye yezona zinto zibalulekileyo ebomini babantu.
Ukudibanisa akukho ngaphandle kulo mkhwa wokuhlalisana, kwaye kukuba kweli qonga umculo ubambe indawo ebaluleke kakhulu ekuhlaleni, ewe enye yezona zinika elona xabiso kule nto yimisinga kuba ngabo abayisebenzisayo kungomculo abanokuthi benze usasazo lwabo lube nomtsalane ngakumbi kubalandeli babo kwaye babakhuthaze ukuba babaxhase ngemali.
Masingakulibali ukuba umculo ungaluphakamisa usasazo okanye ubenze babole emazantsi, benze abantu bazive bekhululekile okanye bengakhululekanga, ngamafutshane, umculo sisixhobo esinamandla kwaye ukuba imilambo iyayazi indlela yokuwusebenzisa ngokuchanekileyo iya kukuzisela izibonelelo ezininzi, usuka kwixabiso eliphantsi uye kudumo.
Inkcukacha enomdla kakhulu abantu abaninzi abangayithathiyo ingqalelo kwimihla yabo yemihla ngemihla, yeyokuba ingoma nganye, umculo okanye imvelaphi yomculo esiyithandayo kwaye amaxesha amaninzi sicula okanye sicula, zenziwe ngumntu othile, zinombhali, ekhuselweyo ngumthetho Kwaye ukuba awunayo imvume ehambelana nokuyisebenzisa, unokuba neziphumo ezihle zomthetho.
Kule nkalo Itwitch ingqongqo kakhulu, Kakhulu kangangokuba xa ubhalisela kwiqonga bayakuxwayisa kwaye bacele ukuba usayine ifom apho uzibophelela khona hlonipha ilungelo lokushicilela, ayisiyomculo kuphela, kodwa nayo yonke imiba egubungela iqonga.
Eyona idumileyo yenza njani ukusebenzisa ezi ngoma:
Las bayathengaOko kukuthi, bacela umculo ngesicelo esivumela ukuba bafikelele kwiingoma abazithandayo ngokuhlawula amalungelo okusetyenziswa kumbhali okanye ababhali. Ezi zicelo ziyacetyiswa nguTwitch, ukuthintela iimfuno ezingaphezulu kubo bobabini abasasaza kunye neqonga.
Isandi sobhubhane: le yenye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu Ukusasazeka kwegamaAyisiyiyo eyonanto inelungelo lokushicilela, kodwa nangenxa yezihloko ezininzi ezinamaqonga ayo, ezonyuka veki nganye, ukugcina iingoma ezahlukeneyo.
Ezinye zezibonelelo ezibonelelayo:
Ulwandiso Kwithala leencwadi lomculo veki nganye.
Akhawunti iingoma ezingaphezu kwe-30.000 kunye nezandi ezingama-60.000 zokukholisa incasa yomntu wonke.
Ungalanda umculo kwiikhompyuter zakho, kwaye uzisebenzise kusasazo.
2 Imigaqo engenakwaphulwa:
3 Eyona idumileyo yenza njani ukusebenzisa ezi ngoma:
Ndifuna ukwazi ukuba uhlela njani iifoto kwi-Instagram?
Uyithumela njani ividiyo kwi-Instagram IGTV?